Myitter, Author at Myitter - Page 326 of 330
ကားပျက်တာကို မကူညီတဲ့အပြင် ခြိမ်းခြောက်ပြီးငွေပါတောင်းတဲ့ အမြန်လမ်းမှ ရဲ(၂)ဦးကို အရေးယူပြီ..
အမြန်လမ်းမှာ ကားပျက်တာကို မကူညီတဲ့အပြင် ခြိမ်းခြောက်ပြီးငွေပါတောင်းတဲ့ ရဲ(၂)ဦးကို အရေးယူပြီ.. မန်လမ်းမကြီး မိုင်တိုင်. ၃၁၁/၃ အနီးတွင်. မော်တော်ယာဉ် ပျက်ရ်ျ အခြားယာဉ်တစီးဖြင့်. ဆွဲလာသည်ကို. အမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ ဝင်(၂) ဦးမှ ထိုသို့ယာဉ်ဆွဲ ယူခြင်းသည် အမြန်လမ်းမကြီး ဥပဒေအရ […]
သတ်ခံရသူ မူကြိုဆရာမလေးအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျန်ရစ်သူ မိသားစုရဲ့ ပြောပြချက်တွေ
ကော့ခပုံက မူကြိုဆရာမလေးသတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျန်ရစ်သူ မိသားစုများနှင့် စခန်းမှူးတို့ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သေဆုံးသူ မူကြိုဆရာမလေး မချမ်းဟာ ရိုးသားအေးချမ်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်သလို တခြားသူတွေနဲ့ စီးပွားရေးအရ၊ လူမှုရေးအရ ငွေရေးကြေးရေးအရ ရှုတ်ရှုတ်ထွေးထွေးမရှိပဲ ဆရာမအလုပ်ကိုပဲ စိတ်ဝင်တစား ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေသူ တစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုဒေါ်လာနဲ့ (၃)နှစ်လောက် မေတ္တာရှိခဲ့ကြပြီးမှ အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊ ရန်ညှိးရန်စဖြစ်ရလောက်တဲ့ […]
မာဖီးယားဂိုဏ်းလို ဖြစ်နေတဲ့ မန္တလေးတောင်ခြေက ဒုစရိုက်မှောင်ခိုလောက…
July 16, 2019 Myitter 0
သာသနာ့နယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့မန္တလေးတောင်ခြေ ပတ်ပတ်လည်မှာ တစ်ချိန်ကဘုန်းကြီးကျောင်း စုစုပေါင်း ၁၈ ကျောင်းသာရှိခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့မှာတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ သီလရှင်ကျောင်းပေါင်း ၂၀၀ ကျော် ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ် တကယ်တော့ ယခုလို ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေသီလရှင်ကျောင်းတွေ တိုးလာတာဟာ သာသနာအတွက်တော့ ဝမ်းသာအားတက်စရာပါ။ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့မှာတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေနဲ့သီလရှင်ကျောင်းပေါင်း ၁၀၀ ကျော်မှာသာသနာရေးနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့မူးယစ်​​ဆေးဝါး​ […]
၁၈၇မိုင်ဝေးတဲ့ ဆေးရုံကို အမေနဲ့ ညီတင်ပြီး စက်ဘီးစီးပြီးလိုက်ပို့ပေးတဲ့ အသက် ၁၃နှစ်အရွယ်ကောင်လေး
အသက် ၁၃နှစ်အရွယ် Quyet Chien ဆိုတဲ့ ကောင်လေးဟာ သူ့ရဲ့ ညီဖြစ်သူ ၂လသားအရွယ်ကလေး ဆေးရုံတင်ရမယ်လို့ သိတဲ့အခါ အမေနဲ့ ညီလေးကို စက်ဘီးနဲ့တင်ပြီး Hanoi မှာရှိတဲ့ ဆေးရုံကို အမြန်ပို့ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ ထိုအချိန်မှာ အဖေဖြစ်သူကလည်း အလုပ်ဖြင့်ခရီးသွားတာ ပြန်မရောက်တဲ့အပြင် ဆေးရုံနဲ့ Chien တို့သားမိနေတဲ့ […]
(၁၀)ရက်အကြာမှ ကြိုးကွင်းစွပ် အသတ်ခံရသည့်အနေထားဖြင့် မူကြိုကြောင်း ပြန်လည်တွေ့ရွိ
ျေပာက်ဆုံးနေသော မူကြိုကြောင်းဆရာမေလးအား (၁၀)ရက်အကြာ၌ ကြိုးကွင်းစွပ် အသတ်ခံရသည့်အနေထားဖြင့် ပြန်လည်တွေ့ရွိ မုဒုံမြို့နယ် ကော့ခပုံကြေးရွာမွ (၆.၇.၂၀၁၉)ရက်နေ့ညေန၌ျေပာက်ဆုံးနေသော မူကြိုကြောင်းဆရာမအား ( ၁၅.၇.၁၉)ရက်နေ့ ညေန၃ နာရီခြိန်ခန့်၌ ကွမ်တာကြေးရွာ ဆည်းမြောင်အနီးရွိျေခာင်းအတွင်းတွင် ဂုံနီအိတ်အပြာရောင်ဖြင့် ထုတ်ထားသော အထုတ်တစ်ထုတ်အတွင်း၌ျေပာက်ဆုံးနေသူအား လည်ပင်ကြိုးကွင်း စွပ်လကြ် အသတ်ခံရသည် […]
ဒီလိုဆရာမမျိုး လိုချင်တယ်… ကြံခင်း..စက်တင်​ဘာ(၁၂) မဟာဘောဂလမ်း(ရဲစခန်းဝန်း)ရှေ့ ပလက်ဖောင်းပေါ်ကမြင်ကွင်းလေး၊ အမှိုက်ခြင်းအမှိုက်ပုံပေါင်းစုံက ရှာဖွေကောက်ယူလာဟန်ရှိသော ဘူးခွံပုလင်းခွံများကို ပီနန်အိတ်ဖြင့် ထမ်းလျက် ၁၂နှစ်ခန့်အရွယ် ကလေးငယ်တဦး.. သူ့ရှေ့ မှာတော့ ဖြူစိမ်းဝတ်စုံဖြင့် ပညာရေးဌာနမှ ဆရာမကြီးတဦးကရပ်လျက်.. ဆိုင်ကယ်က်ိုရပ် ဘေးနားအပြေးကပ်.. စပ်စပ်စုစုကျွန်တော်… *ခလေးကကျောင်းမနေဘူးလား? *သုံးတန်းထိနေဘူးပါတယ် *ဘယ်မှာနေလဲ..ဘာလို့ကျောင်း ဆက်မတက်တာလဲ? […]
ဒီပုံကို ဟာသပုံ အမြင်နဲ့ ကျွန်တော်သုံးမိခဲ့ပါတယ်။သိတဲ့သူရော မသိသေးတဲ့သူအတွက်ပါ ကျွန်တော် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် ကိုလည်း မိတ်ဆွေ တစ်ယောက် အကြုံပြုလို့ သိရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟာသ ပုံ ဟာသ အမြင်အနေနဲ့ မသုံးဖို့ ကျွန်တော် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ဘုရားရှိခိုးနေတဲ့ ကောင်မလေးပုံပါ။ ဟာသ အရွှန်းဖေါက်တဲ့သဘောနဲ့ မသုံးစေချင်ပါဘူး။တိဘက်ဒေသနဲ့ ဘူတန်နိုင်ငံက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ […]
အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ အမျိုးသမီးငယ်လေးတစ်ဦးကို မဖွယ်မရာပြုနေတဲ့ CCTV မှတ်တမ်းဗွီဒီယိုဖိုင်
July 15, 2019 Myitter 0
အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ မိန်းကလေးကို မဖွယ်မရာပြုနေတဲ့ CCTV မှတ်တမ်းဗွီဒီယိုဖိုင် မလေးရှားနိုင်ငံက မုန့်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ မုန်လာဝယ်နေတဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်မှ အကြီးမလေးကို ပြုလုပ်နေတာပါ။ အခု ဒီဗွီဒီယိုဖိုင်လေးကို တွေ့မြင်သူတိုင်း သမီးရှင်မိဘများအတွက် မိမိရဲ့ ရင်သွေးငယ် သမီးလေးမျာကို မည်သည့်နေရာကိုမှ လူကြီးမပါပဲ ….. မလွှတ်မိကြစေဖို့ Sharing လုပ်ပြီးအထူးသတိပေး သွားကြပါလို့ […]
ဝါဆိုလပြည့်နေ့ လ တပိုင်းကြတ်မည်…
ဝါဆိုလပြည့်နေ့ လ တပိုင်းကြတ်မ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၁၆) ည၊ (၁၇) မနက်ခင်းပိုင်းမှာ ကမ္ဘာရဲ့ အရိပ်စစ်အတွင်း လ တခြမ်း (တပိုင်း) ဝင်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး.. အဆိုပါ လခြမ်း (အပေါ်ပိုင်း) နီရဲသွားခြင်း (တနည်း) လပေါ်သို့ ကမ္ဘာ၏အရိပ် ကျရောက်သွားခြင်းကို မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် […]
အော်တိုဂီယာ ကားကို မောင်းနှင်သူများ အတွက် ဒါလေးတွေကို မဖြစ်မနေ သိထားရပါမယ်…
အော်တိုဂီယာ ကား မောင်းနှင် အသုံးပြုသူများ အတွက် ကျိန်းသေ သိထားရပါမယ်တိတိကျကျ လေး နားလည်ထားသင့်ဖတ်ထားသင့်သည့် ပိုစ့်ဖြစ်သောကြောင့် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ မေး။ တစ်လောက အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အငြင်းပွားနေကြတဲ့…အော်တိုဂီယာအကြောင်းနဲ့OD(Overdrive off) အသုံးပြုပုံအကြောင်း နဲ့ အော်တိုဂီယာ ဘရိတ်စနစ်အကြောင်းလေး မေးချင်လို့ပါ ဖြေ။ ဟုတ်ကဲ့ […]